Bhuku Rekutanga raSamueri 25:1-44
Kufa kwaSamueri (1)
Nabhari anoramba chikumbiro chevarume vaDhavhidhi (2-13)
Abhigairi anoratidza uchenjeri (14-35)
‘Homwe yeupenyu yaJehovha’ (29)
Nabhari uyo aiva benzi anorohwa naJehovha (36-38)
Abhigairi anova mudzimai waDhavhidhi (39-44)
25 Nekufamba kwenguva, Samueri+ akafa; uye vaIsraeri vese vakaungana kuti vamucheme uye vamuvige pamba pake muRama.+ Dhavhidhi akabva asimuka, akadzika kurenje reParani. 2 Zvino muMaoni+ maiva nemumwe murume aishandira muguta reKameri.*+ Murume wacho akanga akapfuma chaizvo; aiva nemakwai 3 000 nembudzi 1 000, uye panguva iyoyo aiveura makwai ake muKameri. 3 Murume wacho ainzi Nabhari,+ uye mudzimai wake ainzi Abhigairi.+ Mudzimai wacho akanga akachenjera uye akanaka, asi murume wacho uyo aiva wekwaKarebhi,+ aiva nehasha uye akanga aine unhu hwakaipa.+ 4 Dhavhidhi akanzwa ari murenje kuti Nabhari akanga achiveura makwai ake. 5 Saka Dhavhidhi akatuma varume vechidiki gumi kwaari uye Dhavhidhi akati kuvarume vacho: “Kwirai kuKameri, uye kana masvika kuna Nabhari, mukwazisei muzita rangu. 6 Mubve mati, ‘Raramai kwenguva refu uye zvinhu ngazvikufambirei zvakanaka* imi neimba yenyu nezvinhu zvenyu zvese. 7 Ndanzwa kuti muri kuveura makwai enyu. Vafudzi venyu pavaiva nesu hatina kuvaitira zvakaipa,+ uye havana kana chinhu chimwe chete chavo chavakashaya nguva yese yavaiva muKameri. 8 Bvunzai varume venyu uye vachakuudzai. Nzwirai varume vangu nyasha, nekuti tauya panguva yekufara.* Ndapota, ipai varanda venyu nemwanakomana wenyu Dhavhidhi chero chamunokwanisa.’”+ 9 Saka varume vaDhavhidhi vakaenda vakanoudza Nabhari mashoko aya ese muzita raDhavhidhi. Pavakapedza, 10 Nabhari akapindura vashandi vaDhavhidhi achiti: “Dhavhidhi wacho anombova aniko, uye mwanakomana waJese anombozviita ani? Mazuva ano varanda vakawanda vari kutiza vanatenzi vavo.+ 11 Ndingatora chingwa changu nemvura yangu nenyama yandaurayira vaveuri vemakwai angu ndichipa varume vandisingazivi kwavabva here?” 12 Varume vaDhavhidhi vakabva vadzokera, vakamuudza mashoko aya ese. 13 Dhavhidhi akabva angoti kuvarume vake: “Munhu wese ngaatore bakatwa rake!”+ Saka vese vakasungirira mapakatwa avo uye Dhavhidhi akasungirirawo bakatwa rake, uye varume vanenge 400 vakaenda naDhavhidhi, asi vamwe 200 vakasara nezvinhu. 14 Izvi pazvaiitika, mumwe muranda akaudza Abhigairi, mudzimai waNabhari kuti: “Dhavhidhi atuma nhume kubva kurenje kuti dzikwazise tenzi wedu, asi iye adzituka chaizvo.+ 15 Varume ivavo vakatiitira zvakanaka chaizvo. Havana kana kumbotiitira zvakaipa, uye hatina kana chimwe chete chatakashayiwa pazvinhu zvedu panguva yese yataiva navo musango.+ 16 Vakanga vakaita serusvingo rwaitidzivirira kumativi ese, siku nesikati, panguva yese yataiva navo tichifudza makwai. 17 Saka fungai kuti muchaita sei, nekuti izvi zvichaguma nedambudziko kuna tenzi wedu neimba yake yese,+ uye tenzi wedu haabatsiri,+ hapana angataura naye.” 18 Saka Abhigairi+ akabva akurumidza kutora zvingwa 200, zvirongo zvihombe zvewaini zviviri, makwai mashanu akagadzirwa, maseya* mashanu ezviyo* zvakakangwa, makeke 100 emazambiringa akaomeswa, nemakeke 200 emaonde akaomeswa, akazvitakudza zvese pamadhongi.+ 19 Akabva ati kuvaranda vake: “Tungamirai; ndiri kutevera.” Asi haana zvaakaudza murume wake Nabhari. 20 Paakanga akatasva dhongi achidzika akavhariridzwa negomo, Dhavhidhi nevarume vake vakanga vachitodzikawo vakananga kwaari, uye akasangana navo. 21 Dhavhidhi akanga achiti: “Ndakashandira pasina pandakachengeta zvinhu zvese zvemunhu uyu murenje. Hapana kana chinhu chake chimwe chete chakashayikwa,+ asi iye ari kunditsiva nezvakaipa pazvinhu zvakanaka zvandakamuitira.+ 22 Mwari ngaaitire vavengi vaDhavhidhi* saizvozvo uye ngaawedzere pazviri kana mangwana mangwanani akasvika paine murume* mumwe chete wandinenge ndasiya ari mupenyu pavanhu vake.” 23 Abhigairi paakaona Dhavhidhi, akabva akurumidza kuburuka padhongi, akapfugama, akadzikisa musoro wake pamberi paDhavhidhi. 24 Akabva apfugamira pedyo netsoka dzaDhavhidhi, akati: “Ishe wangu, mhosva yacho ngaive yangu; regai murandasikana wenyu ataure nemi, uye teererai mashoko emurandasikana wenyu. 25 Ndapota, ishe wangu ngaarege kuteerera murume pasina uyu, Nabhari,+ nekuti akangoita sezita rake. Anonzi Nabhari,* uye upenzi huri maari. Asi ini murandasikana wenyu, handina kuona varume vashe wangu, idzo nhume dzenyu. 26 Ishe wangu, chokwadi naJehovha mupenyu uye neupenyu hwenyu,* Jehovha ndiye aita kuti murege+ kuva nemhosva yekudeura ropa+ uye kuti murege kutsiva* neruoko rwenyu. Vavengi venyu nevaya vari kutsvaga kuitira ishe wangu zvakaipa ngavaite saNabhari. 27 Itai kuti chipo*+ ichi chauya nemurandasikana wenyu kunashe wangu chipiwe varume vanashe wangu.+ 28 Ndapota, regererai kukanganisa kwemurandasikana wenyu, nekuti chokwadi Jehovha achaitira ishe wangu imba inogara kwenguva refu,+ nekuti ishe wangu ari kurwa hondo dzaJehovha,+ uye hapana chakaipa chakawanika pamuri mazuva enyu ese.+ 29 Kana pakava nemunhu anokudzingirirai achitsvaga kukuurayai,* upenyu hwashe wangu huchange hwakachengetwa naJehovha Mwari wenyu akahuputira muhomwe yeupenyu, asi upenyu hwevavengi venyu achahukanda kwakadaro uko sematombo ari kubva muchipfuramabwe. 30 Uye Jehovha paachaitira ishe wangu zvinhu zvese zvakanaka zvaakavimbisa uye paachakugadzai kuti muve mutungamiriri weIsraeri,+ 31 hamuzonetseki kana kuzvidemba* mumwoyo menyu kuti makadeura ropa pasina chikonzero uye kuti ruoko rwashe wangu rwakatsiva.*+ Jehovha paachaitira ishe wangu zvakanaka, yeukai murandasikana wenyu.” 32 Dhavhidhi akabva ati kuna Abhigairi: “Jehovha Mwari waIsraeri ngaarumbidzwe, uyo akutuma nhasi kuti usangane neni! 33 Uye Mwari ngaakukomborere nekuchenjera kwako! Komborerwa nekundidzora kwawaita kuti ndirege kuva nemhosva yekudeura ropa+ uye kuti ndirege kutsiva* nemaoko angu. 34 Chokwadi naJehovha Mwari waIsraeri mupenyu, uyo andidzivisa kuti ndisakuitira zvakaipa,+ kudai wanga usina kukurumidza kuuya kuzosangana neni,+ hapana murume* wekwaNabhari aisara ari mupenyu paizosvika mangwanani.”+ 35 Dhavhidhi akabva agamuchira zvaakanga amuunzira, akati kwaari: “Enda kumba kwako nerugare. Ona, ndanzwa zvawataura uye ndichaita zvawakumbira.” 36 Gare gare Abhigairi akadzokera kwaiva naNabhari, uyo akanga achidya kunge mambo ari mumba make, uye mwoyo waNabhari waifara, uye akanga akadhakwa kusvika pekupedzisira. Haana kana chaakamuudza kusvikira kwaedza. 37 Ava mangwanani, Nabhari paakanga asisina kudhakwa, mudzimai wake akamuudza zvinhu izvi. Mwoyo wake wakabva waita sewemunhu akafa, muviri wake ukaramba wakaoma sedombo. 38 Pashure pemazuva anenge gumi, Jehovha akarova Nabhari, akafa. 39 Dhavhidhi paakanzwa kuti Nabhari akanga afa, akati: “Jehovha ngaarumbidzwe, uyo atonga nyaya yangu+ yekuzvidzwa kwandakaitwa naNabhari+ uye akadzora muranda wake pakuita zvakaipa,+ uye Jehovha aita kuti zvakaipa zvaNabhari zvimudzokere!” Dhavhidhi akabva atumira shoko kuna Abhigairi achimukumbira kuti ave mudzimai wake. 40 Saka vashandi vaDhavhidhi vakasvika kuna Abhigairi kuKameri, vakati kwaari: “Dhavhidhi atituma kwamuri kuti tikutorei muve mudzimai wake.” 41 Akabva angosimuka, akapfugama ndokudzikisa musoro wake, akati: “Ipai henyu muranda wenyu basa rekugeza tsoka+ dzevaranda vashe wangu.” 42 Abhigairi+ akabva akurumidza kugadzirira, akatasva dhongi rake, varandakadzi vake vashanu vachifamba vari shure kwake; akaenda nenhume dzaDhavhidhi akava mudzimai wake. 43 Dhavhidhi akanga aroorawo Ahinoamu+ wekuJezreeri,+ uye vakadzi vacho vari vaviri vakava madzimai ake.+ 44 Asi Sauro akanga apa mwanasikana wake Mikari,+ mudzimai waDhavhidhi, kuna Pariti+ mwanakomana waRaishi, wekuGarimu.
^ Iri harisi Gomo reKameri; asi iguta raiva muJudha.
^ Kana kuti “ivai nerugare.”
^ ChiHeb., “pazuva rakanaka.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “ngaaitire Dhavhidhi.”
^ Kureva kuti “Benzi.”
^ Kana kuti “kuunza ruponeso.”
^ Kana kuti “achitsvaga mweya wenyu.”
^ ChiHeb., “hamuzodzedzereki kana kugumburwa.”
^ Kana kuti “rwakaunza ruponeso.”
^ Kana kuti “ndirege kuunza ruponeso.”